Ardell Aqua Lashes Review: Tena mandaitra tokoa ve ireo volomaso sandoka ireo?
Yahoo Lifestyle Canada dia manolo-tena hitady ny vokatra tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra. Mety hahazo anjara amin'ny fividianana natao tamin'ny rohy eto amin'ity pejy ity isika. Mety hiova ny vidiny sy ny fisiany. Tadidinao ve fa teo amin'ny toerana rehetra ny lakaolin'i Elmer fony aho nilalao zavakanto sy asa tanana fony aho mbola kely? Dekady...
Ity Halloween ity, ny akanjo mora indrindra dia akanjo fanatanjahan-tena
Tamin'ny taona 2019, na ny androm-piainany lasa izay, dia nanambara aho fa ny jumpsuit malaza hatrizay dia ny "grail masin'ny Halloween." Tamin'izany fotoana izany, dia nisy dikany izany: Booksmart, Fleabag, Us — ireo no fotoana nifantohan'ny kolontsaina pop, ary izy rehetra dia nampiseho akanjo iray tonga lafatra farafaharatsiny. Saingy misy ny zava-misy ...
Fandinihana momba ny vinavinan'ny tsena manerantany momba ny volomaso sandoka
Dublin, 11 aogositra 2021 (Global News Agency)-ResearchAndMarkets.com dia nanampy ny tatitra "False eyelashes market for 2028-COVID-19 Impact and Global Analysis (by Type, Material and Distribution Channel)" amin'ny vokatra ResearchAndMarkets. com. Tamin'ny taona 2021, ny volomaso sandoka m...
Akanjo Halloween 3 minitra farany novelomina miaraka amin'ny eyeliner
Akanjo Halloween 3 minitra farany novelomina miaraka amin'ny eyeliner Manaova ody amin'ny alàlan'ny kitapo makiazy anao. Raha toa ka tsy nipoitra hatramin'ny minitra farany ny drafitry ny Halloween anao, dia mety izao no fotoana hanombohana ny famoronana akanjo mora. Azo antoka fa afaka mipoitra amin'ny sofina roa ianao ary miantso azy hoe ...
Ny 40th Qingdao International Beauty Expo
2021 ny 40th Shina (Qingdao) International Beauty Salon cosmetics Expo (Beauty Expo) natao tao amin'ny Qingdao International Convention and Exhibition Center tamin'ny 11-13 Oct. , miaraka amin'ny faritra ...
Ity mascara $9 ity dia manana tsikera kintana dimy Amazon mihoatra ny 52.000
Mifidy ireo vokatra ireo tsy miankina izahay satria tianay izy ireo, ary manantena izahay fa tianao koa izy ireo. Miantsena amin'ny E! Misy ny fiarahana, ka raha mividy zavatra amin'ny rohy misy anao ianao dia mety hahazo komisiona. Ny mpivarotra dia mivarotra ny entana fa tsy E! Maharitra hatramin'ny...
Ho an'ny loko voalohany amin'ny fararano dia nisafidy BV Green aho
Ho an'ny loko voalohany amin'ny fararano dia nisafidy BV maitso 1 aho. Ny lamaody dia zavatra miova haingana. Ohatra, tsy ampy intsony ny mizara ny loko malaza araka ny taona. 2. Hatramin'ny niverenan'i Bottega Veneta tamin'ny lisitra mafana miaraka amin'ny famolavolan'ny talen'ny famoronana Daniel Lee, ny singa famolavolana rehetra ...
Hafiriana no haharitra ny fanalavam-pikapohana?
Hafiriana no haharitra ny fanalavam-pikapohana? Ny fanitarana kapoka mazàna dia maharitra ny androm-piainany mitovy amin'ny tsingerin'ny karavasy voajanahary, izay eo anelanelan'ny 4-6 herinandro. Na izany aza, mba hialana amin'izy ireo tsy mitongilana rehefa mihalehibe izy ireo, ny ankamaroan'ny salon-karatra matetika dia manoro ny top up aorian'ny 2 na 3 herinandro mba hitazonana ny kapoka ho tena ...
FILAZANTSARA ho an'ny fetim-pirenena
FILAZANA Tsara marihina fa amin'ny fetim-pirenena isika manomboka ny 1 oktobra ka hatramin'ny 7 oktobra 2021. Mandritra izany fotoana izany dia tsy miasa isika ary tsy afaka mamaky mailaka. fa raha misy zavatra ilaina maika amin'ny volomaso sandoka dia antsoy ny findaiko +86 135...
Ahoana ny fomba hahitana ny volomaso diso ho an'ny endrikao maso (2)
Ahoana no hahitana ny kapoka maso diso ho an'ny endrika masonao Ny fahafantarana ny bikan'ny masonao dia hanampy anao amin'ny famolavolana ny makiazy tsara indrindra mifanaraka amin'ny tavanao, fa ahoana kosa no hamaritana ny endriky ny masontsika? Makà fitaratra hijerena ny maso amin'ny ankapobeny ary hanombantombana ny mombamomba azy. 1. Azonao jerena ve ny iris manontolo (ny loko...
Ahoana ny fampiharana ny volomaso diso (1)
Ahoana ny fametahana volomaso diso 'Mila fanazaran-tena sy faharetana be ny fifehezana ny fahaiza-manao amin'ny fametahana kapoka sandoka fa tsy azo tsinontsinoavina avy hatrany ny vokatra!' hoy ny ambasadaoron'ny mpanao makiazy bareMinerals, Cher Webb. 'Alohan'ny fampiharana karavasy rehetra dia...
Christian Dior: Designer of Dreams Exhibition dia misokatra ao amin'ny Museum Brooklyn
Taorian'ny fahombiazany tao amin'ny Museum of Decorative Arts any Paris, "Christian Dior: Designer of Dreams" dia hatolotra ao amin'ny Museum Brooklyn any New York manomboka amin'ny 10 Septambra 2021. Ny mpiandraikitra Florence Muller, miaraka amin'ny mpiandraikitra MATTHEW YOKOBOSKY, dia nisafidy safidy. zavatra...